मंगल ग्रहमा मौसम परिवर्तन। सम्भावित सागरको प्रमाण | नेटवर्क मौसम विज्ञान
आज मंगलबार हिउँको संसार हो। यद्यपि इतिहासभरि यसमा राम्रा तापक्रमका केही क्षणहरू थिए जसबाट नदीहरू र समुद्रहरू बग्थे, पग्लिएका हिमनदीहरू थिए र सम्भवतः त्यहाँ प्रशस्त जीवन थियो।
यद्यपि, आज मंगलबारको सतह सतहमा रहेको छ र यसमा वायुमण्डलमा पानीको मात्रा प्राय: शीतमा परिणत हुन्छ, विशेष गरी यसको उत्तरी पोलमा त्यो क्षेत्रमा यसले बारहमासी हिउँ क्याप्स बनाउँदछ। मंगल ग्रहको मौसमलाई के भयो?
1 मंगल ग्रहको सतह र वातावरण
2 मंगल ग्रहको विगत
3 हराएको सागर?
4 मौसम परिवर्तन
मंगल ग्रहको सतह र वातावरण
यद्यपि यो अभूतपूर्व देखिन्छ, तथापि CO2 ले ताप कायम राख्यो, यो ग्रहको दक्षिण ध्रुवको क्षेत्रमा। धेरै फ्रिज गरिएको CO2 बस्छ। यस ग्रहको सतहले पानीको स show्केत देखाउँदैन, केही शीत क्षेत्रहरुमा वा पुरानो बाढीले खोलेर उपत्यकाको रूपमा बाहेक।
मंगल ग्रहको वातावरण चिसो, सुख्खा र दुर्लभ छ। यो पातलो घुम्टो, प्राय जसो CO2 बाट बनेको छ, सतहमा एक दबाब सिर्जना गर्दछ समुद्रको स्तरमा पृथ्वीमा दर्ता भएको १% भन्दा कम हो। मंगल ग्रहको ग्रह हाम्रो ग्रह भन्दा सूर्य बाट further०% बढी छ। थप रूपमा, यसको वरपरको वातावरण एकदम ठिक छ, जसले यस हिउँ पर्ने वातावरणमा योगदान गर्दछ। औसत तापमान--degrees डिग्री हुन्छ, पोलमा -१२60 डिग्रीको तापक्रम पुग्छ।
एकदम उल्टो ग्रह भेनस । दिउँसो सूर्य उत्पादन गर्न सक्षम हुन पर्याप्त सतह ताप गर्न सक्षम छ कहिले काँही पिउने, तर कम वायुमण्डलीय चापले पानी तुरुन्तै वाष्पीकरणको कारण गर्दछ।
जे होस् वायुमण्डलमा पानीको थोरै मात्रा हुन्छ र कहिलेकाँहि पानी र बरफका बादलहरू आउँछन्, मंगल ग्रहको मौसम वालुको आँधी वा कार्बन डाइअक्साइडको जेलले देखाउँदछ। प्रत्येक जाडोमा बर्फीले कार्बन डाइअक्साइडको एउटा हिउँले एउटा खम्बालाई हान्यो, र बर्फीले कार्बन डाइअक्साइड विपरीत ध्रुव टोपीबाट वाष्पीकरण हुने बित्तिकै, त्यो सुख्खा बरफको धेरै मिटर जम्मा। तर ध्रुवमा पनि होइन जहाँ ग्रीष्म isतु हो र सूर्य दिनभरि चम्किरहेको छ, तापक्रम यति धेरै बढ्दछ कि त्यो बरफमा पानी पग्लिन।
मंगल ग्रहको विगत
म Mars्गलबारका अधिकांश क्रेटरहरू ज्यादै कम खेर गए। लगभग हरेक कान्छो र सबैभन्दा ठूलो क्रेटर तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ माटो बगैंचा जस्तै संरचनाहरू। यी हिलोका बगानहरू सम्भवतः पुरानो प्रलयको जमेको अवशेष, एस्टेरोइडको टकराव वा मंगल ग्रहको सतहको साथ धूमकेतुहरू हुन् जसले जमिनको पर्माफ्रोस्टको क्षेत्र पिघलेर बग्ने र जमिनमा तरल पानी भएको क्षेत्रहरूमा गहिरो प्वालहरू कोरिदिएका छन।
प्रमाण फेला परेको छ कि कुनै समय सतहमा बरफ गठन गरियो जसले सामान्यतया हिमनदी परिदृश्यहरू सिर्जना गर्‍यो। यसमा हिमनदीहरू पग्लेर उनीहरूको सिमानामा बाँकी रहेका तलछोहरू मिलेर बनेका चट्टानहरू र बरफको पानामुनि बग्ने खोलाहरूद्वारा हिमनदीहरूको मुनिको बालुवा र बजरीका टेपहरू समावेश छन्।
यो सम्भव छ कि मंगल ग्रहको पानी चक्रमा भिजेको एपिसोडहरूमा घटकहरू थिए। एक बाक्लो वातावरण सम्भवतः समावेश गर्दछ ताल र समुद्रबाट पानीको पर्याप्त मात्रामा बाष्पीकरण गरियो। पानीको बाफ घनघोर हुने र बादलमा परिणत हुने थियो। खसेको पानीले नदी बग्नेछ र यसको अधिकांश भाग सतहमा बग्नेछ। अर्कोतर्फ, हिमपातहरू हिमनदीहरू जम्मा हुने थियो, र यसले हिमन तालमा उनीहरूको पिघलदो पानी सल्काउँथ्यो।
मंगल ग्रहबाट लिएका केही छविहरूले सतहमा ठूला जल निकासी च्यानलहरूको अस्तित्व प्रकट गर्दछ। यी मध्ये केही संरचना २०० भन्दा बढी किलोमिटर चौडा र २,००० किलोमिटर वा सोभन्दा बढीसम्म फैलिएको हुन्छ। यी जल निकासी च्यानलहरूको ज्यामितिले संकेत गर्छ कि पानी सतह भन्दा कम पार गर्न सक्दछ प्रति घण्टा २ 270० किलोमिटरमा।
म Mars्गलको केहि उच्च स्थानहरूमा उपत्यकाका बृहत प्रणालीहरू छन् जुन तलछारको तनाव र नालीहरूमा बग्दछ, कुनै न कुनै क्षेत्रमा बाढी आएको। तर यी तालहरू यस ग्रहमा पानीको सबैभन्दा ठूलो स .्कलन थिएन। बारम्बार बाढी आउँदा जल निकासी च्यानलहरू उत्तर तर्फ फर्किए र यसरी गठन भयो क्षणिक ताल र समुद्रहरूको श्रृंखला। फोटोमा व्याख्या गर्न सकिन्छ, यी पुरानो प्रभाव बेसिन वरिपरि देखेका धेरै सुविधाहरू ती क्षेत्रहरूलाई चिह्नित गर्छन् जहाँ हिमनदीहरूले पानीको गहिरो शरीरमा छोडेका थिए।
विभिन्न गणनाको अनुसार, म Mars्गलको उत्तरी सबैभन्दा ठूलो समुद्र मध्येको बराबर खण्डलाई विस्थापित गर्न सक्दछ मेक्सिकोको खाडी र भूमध्यसागर एकसाथ। त्यहाँ मंगलबारमा समुद्रको अस्तित्व रहेको सम्भावना पनि छ। यसको प्रमाण यस तथ्यमा आधारित छ कि उत्तरी मैदानका धेरै सुविधाहरू समुद्री तटको क्षरणको सम्झना दिलाउँदछन्। यस काल्पनिक सागरलाई बोरेलिस महासागर भनिन्थ्यो। यो अनुमान गरिएको छ कि यो हाम्रो आर्कटिक महासागर भन्दा चार गुणा ठूलो हुन सक्छ र मंगल ग्रहको जल चक्र को मोडेल प्रस्तावित थियो जसले यसको सृष्टिलाई व्याख्या गर्न सक्छ।
आज, अधिकांश ग्रहविज्ञान विज्ञहरूले स्वीकार गर्छन् कि पानीको विशाल निकायहरू बारम्बार मंगल ग्रहको उत्तरी मैदानहरूमा गठन हुन्छन्, तर धेरै जना साँचो समुद्र कहिल्यै थिए भनेर इन्कार गर्छन्।
एक जवान मंगलमा, जोडदार कटाव हुन सक्छ, सतह सफा गर्दै। तर पछि, जब उनी मध्यम उमेरमा बढ्दै गए, उनको अनुहार चिसो, सुख्खा र दाग लाग्यो। त्यसबेलादेखि त्यहाँ केहि क्षेत्रहरूमा मात्र बिखेरिएको शीतोष्ण काल ​​भयो।
यद्यपि, म on्गलमा नम्र र गम्भीर शासन प्रणालीहरूको बिचमा हुने संयन्त्र धेरै हदसम्म रहस्य नै रहेको छ। यस बखत, यी मौसम परिवर्तनहरू कसरी हुनसक्दछन् भनेर केवल थोरै विस्तृत विवरणहरू मात्र खोल्न सकिन्छ।
मंगल ग्रहको मौसम परिवर्तनको परिकल्पना को एक यसको आदर्श स्थिति बाट घुमाउने अक्ष को झुकाव मा आधारित छ, कक्षीय विमान को लंबवत। पृथ्वी जस्तै, मंगलबार अब करिब २ 24 डिग्री झुकाइएको छ। यो झुकाव समयको साथ नियमित रूपमा भिन्न हुन्छ। झुकाव पनि द्रुत रूपमा परिवर्तन हुन्छ। प्रत्येक १० करोड बर्ष वा यति, झुकाव अक्षको भिन्नता छिटो 10० डिग्री सम्म कभर हुन्छ। चक्रको अनुसार झुकाव अक्षको अभिविन्यास र मंगल ग्रहको आकार समयसँगै परिवर्तन हुन्छ।
यी आकाशीय संयन्त्रहरू, विशेष गरी घुमा of्गको अक्षको अत्यधिक झुकावको प्रवृत्तिले चरम मौसमी तापक्रम पैदा गर्दछ। एक दुर्लभ वातावरण जस्तो कि आज ग्रहलाई समाहित गर्दछ, मध्य and र उच्च अक्षांशमा गर्मीको तापमान लगातार उच्च हप्ताको अवधिमा हप्ताको लागि जाडोमा पार गर्न सक्दछ, र जाडो आज भन्दा पनि कठोर भएको थियो।
गर्मी को समयमा एक ध्रुव को एक पर्याप्त वार्मिंग संग, तथापि, वातावरण एकदम परिवर्तन भएको हुनुपर्छ। यो सम्भव छ कि अत्यधिक तातो आइस टोपीबाट ग्यासको उत्सर्जन, कार्बनिक भूगर्भबाट वा कार्बन डाइअक्साइड समृद्ध पर्माफ्रोस्टबाट, ग्रीनहाउस वातावरणमा क्षणिक वातावरण उत्पन्न गर्न पर्याप्त वातावरण बाक्लो भयो। यी सर्तहरूमा सतहमा पानी हुन सक्छ। जलीय रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको फलस्वरूप ती न्यानो कालका नुनहरू र कार्बोनेट चट्टानहरूमा गठन हुन्छ; प्रक्रिया बिस्तारै वातावरणबाट कार्बन डाइअक्साइड हटाउने र त्यसैले ग्रीन हाउस प्रभाव कम हुनेछ। मध्यम स्तरको उच्च स्तरको फिर्तीले यस ग्रहलाई अझ चिसो र सुक्खा बरफको बरफ बनाउँदछ, वातावरणलाई पातलो बनाउँदछ र म Mars्गललाई यसको सामान्य बर्फीली अवस्थामा फर्काउँछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » मंगल ग्रहमा मौसम परिवर्तन